नेप्से परिसूचकले बनायो ‘डब्लु’ आकृति | गृहपृष्ठ
Home मुख्य खबर नेप्से परिसूचकले बनायो ‘डब्लु’ आकृति
नेप्से परिसूचकले बनायो ‘डब्लु’ आकृति
मङ्सिर १२, काठमाडौं (अस) । एक महीनाको शेयर बजार हेर्दा परिसूचकले ‘डब्लु’ आकृति बनाएको छ । कात्तिक १३ गतेदेखि मङ्सिर १२ गते मङ्गलवारसम्मको परिसूचकलाई हेर्दा शेयरबजार उकालो लाग्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ । मङ्गलवार नेप्से परिसूचक शून्य दशमलव ६७ प्रतिशत बढेको छ । कारोबार शुरू भएको केहि समय बढेको बजार एक घण्टाको अवधिमा घटेको थियो । तर त्यस पछि निरन्तर बढेको बजार अन्त्यसम्म बढेर बन्द भएको छ । नेप्से १० दशमलव १२ अङ्क बढेर १ हजार ५ सय २३ दशमलव ८६ विन्दुमा पुगेर बन्द भएको छ ।
कारोबार रकम अघिल्लो दिनको तुलनामा १२ दशमलव ९२ प्रतिशत घटेको छ भने कुल बजार पूँजीकरण शून्य दशमलव ६७ प्रतिशत बढेर रू. १७ खर्ब ७० अर्ब पुगेको छ । यस दिन ‘क’ वर्गका कम्पनीहरूको कारोबार मापन सेन्सेटिभ इन्डेक्स शून्य दशमलव ७३ प्रतिशत बढेर ३ सय २१ दशमलव ४६ अङ्क पुगेको छ ।
यस दिन कारोबार भएका १ सय ६३ कम्पनीको ४ हजार ८ सय ६२ पटकको व्यापारमा ९ लाख ९९ हजार ६० कित्ता शेयरको रू. ५७ करोड २१ लाख बराबरको शेयर कारोबार भएको छ । चिलिमे हाइड्रोपावरको प्रतिकित्ता रू. ९ सय ६० मा रू. ४ करोड २३ लाख बराबरको शेयर कारोबार भएको छ । साथै, बुटवल पावर कम्पनी, नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स, नागबेली लघुवित्त, नेपाल क्रेडिट एण्ड कर्मश, राष्ट्रिय बीमा कम्पनीको संस्थापक शेयर, नेपाल बैङ्क, नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी र साना किसान बैङ्कको प्रतिकित्ता रू. १ करोडदेखि रू. ३ करोड ९३ लाखसम्मको शेयर कारोबार भएको छ ।
यस दिन कारोबार भएका १० समूहको परिसूचकमा बीमा कम्पनी र उत्पादन तथा प्रशोधन समूहको परिसूचकबाहेक बाँकी समूहको परिसूचक बढेको छ । यस दिन कारोबारको अन्त्यमा व्यापार समूहको परिसूचक स्थिर भएर बन्द भएको छ । ‘अन्य’ समूहको परिसूचक ४ दशमलव शून्य ३ प्रतिशत बढेको छ । यस समूहमा पर्ने नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीको शेयर मूल्य अघिल्लो दिनको तुलनामा रू. ३७ ले बढेको छ । जलविद्युत लगानी तथा विकास बैङ्कको शेयर मूल्य बढेपछि यस समूहको परिसूचक बढेको हो ।
मिसन डेभलपमेण्ट बैङ्कको शेयर मूल्य अघिल्लो दिनको तुलनामा ७ दशमलव ८१ प्रतिशत बढेको छ । स्वदेशी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको शेयर मूल्य ४ दशमलव ८४ प्रतिशत बढेको छ । साथै, कुबेर मर्चेण्ट फाइनान्सको शेयर मूल्य अघिल्लो दिनको तुलनामा ३ दशमलव २२ प्रतिशत घटेको छ ।
यस दिन कारोबार भएका १ सय ६३ कम्पनीमा ९० कम्पनीको शेयर मूल्य बढेको छ भने ५२ कम्पनीको शेयर मूल्य घटेको छ । साथै, २१ कम्पनीको शेयर मूल्य स्थिर रहेको छ । नेप्सेको १४ दिने रिलेटिभ स्ट्रेन्थ इण्डेक्स न्यूट्रल जोन अथवा ५५ दशमलव ९२ स्केलमा रहेको छ । यसले बजार सन्तुलनमा रहेको देखाउँछ । त्यसैगरी, सो दिन नेप्सेको एडी रेशियो १ दशमलव ७३ रहेको छ । यसले बजार वुलिश प्रवृत्तिमा रहेको देखाउँछ ।